Somaliland:- Qiimaha Shiidaalka Oo Halkii Ugu Saraysay Maraya Iyo Shidaal La,aan Soo Foodsaartay Somaliland
(Hadhwanaagnews) Thursday, May 17, 2018 15:38:42
Hargeysa(HWN):-Magaalada Hargeysa ayaa aad looga dareemayaa kor u kac ku yimid qiimaha shiidaalka, iyada oo ay jirto shiidaal yaraan soo foodsaartay guud ahaan somaliland.
Inta badan kaalmaha shiidaalka ee magaalooyinka waa weyn ee somaliland ayuu ka dhamaaday shiidaalkii, iyada oo inta haysaana ay ku iibinayso qiime aad u sareeya oo ay adag tahay in dadku ay ku iibsadaan.
Shiidaal yaraanta iyo kor u kaca qiimaha shiidaalka ayaa ka dhashay ka dib markii haamaha shiidaalka ee magaalada Berbera lagu shubay shiidaal wasakhaysan, kaas oo ilaa haatan ku jira isla markaana aanu wali dalka soo gaadhin shiidaal kale.
Kaalmaha shidaalka ee magaalooyinka somaliland ayaa
inta badan waxa ka dhammaaday shidaalka gaar ahaana Baatroolka, taasina waxay sababtay in qiimaha shidaalka ay sare u kiciyaan kaalmaha faro ku-tiris ah oo iyagu sii iibinaya shidaal ay ka keeneen dalka Jabuuti.
Arrintan ayaa waxay cabsi galisay gaadiidleyda oo ka baqi qaba sidii ay usii shaqayn lahaayeen maalmaha soo socda haddii aan shidaal la helin. “shidaal yaraan ayaa runtii jirta, kii hore ee wasakhaysnaa ee baabuurta badan waxyeeleeyay, waxaba imika nagaga sii daran in nuurigiisiiba la la’yahay shidaalkii, waxaanan ka baqaynaa inaanu maalmaha soo socda aanu shaqaynba kari weyno oo aanu baabuurta baarkinka iska dhigno.”ayuu yidhi mid ka mid ah gaadiidlayda magaalada Hargeysa.
“Anigu nafarba ma qaadayo oo waan joojiyay ee ganacsatadan dadkii cunaha qabtay, ee nin waliba litirkii uu haystay qiimaha dulsaartay xukuumaddu haka hadasho.” Sidaasi waxa yidhi mid kamid ah Dadka wata baabuurta isticmaasha shidaalka Baatroolka, gaar ahaan kuwa ku xamaasha gaadiidka yaryar ee Tikta loo yaqaan.
dhinaca kale xukuumada somaliland ayaan ilaa hada ka hadal shiidaal yaraanta soo foodsaartay dalka iyo qiimaha cirka isku shareeray.